Maxaa Lagu Xasuusta Shan Sano Kadib Soo Gelitaankii Kenya Dalka Soomaaliya? | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Maxaa Lagu Xasuusta Shan Sano Kadib Soo Gelitaankii Kenya Dalka Soomaaliya?
Shan Sano ka hor Todobaadkan oo kale Ciidanka Difaaca Kenya ee KDF,ayaa loo soo daabulay Soomaaliya,waxaana qorshuhu ahaa in ay Al-shabaab ka saaraan Koofurta Soomaaliya,si ay uga fogeeyaan Sohdinta dalkaasi uu la wadaago Soomaaliya.
Waxaa uu ahaa go’aan adag, sidoo kale tijaabo u ahaa heerka uu gaarsiisan yahay milatariga Kenya,waxaana ay Soomaaliya soo galeen 16kii October 2011kii.
Sanad kadib waxaa ay ku biireen howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya,iyaga oo Al-shabaab ka saaray magaalada Kismaayo oo kaliya.
Jimcaha soo socda Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa hoggaamin doona maalinta Ciidanka Difaaca Kenya ee KDF,isaga oo sidoo kale u sameyn doono baroordiiq Ciidanka kaga dhintay dagaalka ay kula jiraan Al-shabaab.
Waxaa uu xuskaasi ku wajihi doonaa su’aalo ay ka mid yihiin tirade Ciidanka Kenya kaga dhimatay Soomaaliya,qorshaha la qaadanayo Shan Sano kadib iyo kharashka uga baxay Kenya.
Maalintaasi waxaa la xusayo ee maalinta Ciidanka Difaaca Kenya waxaa ay ku soo aadday iyada oo Al-shabaab todobaadkii la soo dhaafay ay weerar ka fuliyeen Mandheera,halkaas oo ay ku dileen lix qof,Mandheera iyo Waqooyi Bari waxaa ay ka mid ahayd goobaha qorshuhu ahaa in laga fogeeyo Al-shabaab ka hor shan sano markii la billaabayay howlgalka?
Guusha ugu weyn ee ay Ciidanka Kenya ka gaareen Al-shabaab ayaa ah in ay ka saareen Magaalada Dekadda leh ee Kismaayo,guul darrada ugu weyn ee ay la kulmeen ayaa ah weerarkii Ceel Cadde iyo in Al-shabaab ay gudaha Kenya gashay,howlgallo joogta ahna ka fuliso.
Guutadii Nasiibka darrneyd!!
15kii January 2016kii,waxaa ay maalin madow u ahayd Ciidanka Kenya ee howlgalka AMISOM ku jira,waxaa ay ahayd maalin tijaabo ka mid ah kuwa loogu soo diray Soomaaliya ay ku mareen Gobolka Gedo.
Guuto laga keenay Gobolka Eldoret,ayaa waxaa ay degganaayeen Degaanka Ceel cadde ee Gobolka Gedo,waxaa ay weerar kala kulmeen Al-shabaab iyaga oo kaliya hal todobaad joogay degaankaasi.
Tirade askarta ku dhimatay ilaa hadda rasmi ugama hadlin Dowladda Kenya,Al-shabaab ayaa sheegtay in 100 Askari ka badan ku dileen kuwana ku qabsadeen nolosha.
Ciidanka yare e ka baxsaday weerarka Ceel Cadde ayey warbixinta xustay in ay Dhimirka beeleen islamarkaana lagu hayo Isbitaalka Memorial Hospital ee Nairobi.sida uu Daily Nation u sheegay sargaal ka mid ah KDF oo u diiday in ay magaciisa xigtaan.
Bil kadib weerarkii Ceel cadde,Kenya waxaa ay sameysay Guddi amni oo soo baara Khasaaraha Ciidanka Kenya ka soo gaaray dagaalka ay kula jirto Al-shabaab,gaar ahaan weerarkii ceel cadde,Saraakiil ka mid ah Milatariga Kenya ayaa u sheegay Sunday Nation,in wali aan lahayn xog rasmi ah oo lagu shaacinayo khasaaraha,waxaase jiro talooyin ay soo jeediyeen guddiga oo la xiriirta habka ay uga howlgalayaan Soomaaliya.
Wargeyska Sunday Nation,ayaa ka codsaday Taliyaha Ciidanka Difaaca Kenya Samson Mwathethe, , in uu wareysi ka siiyo sida ay wax u jiraan,waxaase uu diiday in uu la hadlo warbaahinta.
Degaanka Moi oo ka tirsan Eldoret,ayaa noqday halka ay ka soo jeedaan ciidanka ugu taariikha xun dhinaca dagaalka ee Kenya kadib markii lagu laayay Ceel Cadde,halkaas oo lagu aasay.
7 bilood ka ho rayey ahayd kadib markii guutada 9KR oo ka koobnaa 80-250 Askari la waayay guud ahaan kadib weerarka ay kala kulmeen Al-shabaab,waxaana Kenya dhexdeeda u baxay magaca guudatii Nasiibka xumeyd!.
Waalidiinta qaar ayaa qabo rajo ah in in badan oo ka mid ah wiilashooda ay maqan yihiin oo aysan dhiman islamarkaan ay gacanta ugu jiraan Al-shabaab,kuwaas oo ay filayaan in mar uun ay is arkaan.
Al-shabaab ayaa qaar ka mid ah Askartaas muuqaallo ka duubay oo ay Madaxweynaha Kenya uga codsanayaan in laga saaro gacanta Al-shabaab,waxa ay rabaanna loo fuliyo.
Ka hor Ceel cadde , 1dii September , 2012, Al-shabaab waxaa ay weerar gaadmo ah oo ka dhacay agagaarka Afmadoow ku dileen Saraakiil ku socday kismaayo,waxaana ay kala ahaayeen Saraakiishaas :Lieutenant Francis Muthini,Taliye Guuto, Joseph Nditika Nyamu, Martin Kimngich iyo Corporal CharlesNdemo.
Labo Askari ayey nolosha ku qabsadeen Al-shabaab isla weerarkaas,waxaana ay ku soo bandhigeen Kismaayo,halkaas oo ay Ciidanka Kenya sheegteen in ay Askartaasi dib ugu qabsadeen kadib markii ay magaalada ka saareen Al-shabaab.
Guutada 9KR,waa guuto milatariga Lugta ee Kenya ka tirsan,waxaa la aas aasay 1979, waxaana ay ka mid tahay guutooyinka xulka ah ee loo diro goobaha dagaallada ee uu galayo Qaranka Kenya.
Inta badan Askartii lagu billaabay guutadaas,waxaa ay noqdeen Jenneraallo,waxaana ay hayaan qeybaha kala duwan ee Ciidaka Kenya.
Taliyihii ugu horreeyay ee guutadaas waxaa uu ahaa Daniel Opande, oo Janan noqday,kana soo shaqeeyay Sierra Leone iyo Liberia isaga oo ku shaqeeynayay magaca Qaramada Midoobey howlgallo ay ka wadday waddamadaa.
Taliye kale oo soo maray guutadaas waxaa lagu magacaabaa Joseph Kasaon,hadda waxaa uu yahay Taliye ku xigeenka Ciidanka Difaaca Kenya ee KDF.
Mid ka mid ah Ciidankii ka badbaaday Ceel cadde ayaa taliyihii Guutadaas ku eedeeyay in uu dhagaha ka fureystay digniin ay siiyeen Ciidanka Milatariga Soomaaliya oo u sheegay in uu weerar ku soo socdo,taas oo sababtay in halkaas lagu waayo Askar badan.
Qaar ka mid ah Qoysaska Askartii lagu laayay Ceel cadde ayaa sheegay in ay heleen Magdhowga Askartooda,halka kuwo kale ay sheegayaan in aysan magdhow ama nolol midna heyn.
Dr Duncan Ojwang,oo ah qabiir dhanka amniga sidoo kalena qaanuunka bartay ayaa sheegay in Ciidanka Kenya ay isbeddel ka sameeyeen Soomaaliya,laakiin ay su’aal badan keentay taagta ay ku wajahayaan Al-shabaab,waxaana uu tusaale taban u soo qaatay weerarkii Ceel Cadde oo uu ku sheegen in milatari dagaal loo diray aysan sax ahayn in taas oo kale ay qabato.
Wararka qaar waxaa ay sheegayaan in Ciidanka Kenya ee Soomaaliya jooga gaar ahaan saraakiisha qaarkood ay ku lug leeyihiin ka ganacsiga Dhuxusha iyo Sokorta, laga dhoofiyo ama laga soo dejiyo dekadda Kismaayo,hayeeshee saraakiisha qaar ayaa beeniyay.
Saraakiisha Kenya waxaa ay ku doodayaan in Ciidanka KDF ay tahay markii ugu horreysay oo meel ka baxsan dalkooda ay dagaal u aadaan,waxaana ay sheegayaan in ay casharro ka baranayaan hadda dagaalka ay kula jiraan Al-shabaab.
Al-shabaab,waxaa ay hadda weerarro ka fuliyaan gudaha Kenya,waxaana weerarradii ugu xumaa ee ay gudaha Kenya ka fuliyeen ka mid ahaa weerarkii West gate,kii Lamu iyo weerarkii jaamacadda Gaarisa.
Howlgalka ay ka waddo gudaha Soomaaliya marka meel la iska dhigo waxaa ay waddaa howlgalka xoreynta Kenya Booni ee dhanka Xeebta,halkaas oo ay Al-shabaab ku xoogganyihiin.
W/D:Adam Ibrahim Farah (Showqi)